You are here: Home Home Magacaabistaydii iyo Maagistaydii: Laba isku lammaanaa
Qormadii: 15,16,17 aad
Waatan qormadii oo dhamaystirani..
(Maalin-qorka “Dharaarihii I soo maray”: 19/3/12ka-4/9/12ka)
Waa sunnaha xil-qabashada, xil-qaadka iyo xil-ka-qaadka. Sunnahaas ayaa ina faraya in aynu sarriiganno, sarbeeb iyo sogordahba adeegsanno oo aynaan luuqda sare u dhig-dhiginn innaga oo aan gacmahana saydhayn. Waa sunnaha qaabka hadal-tebinta ee suubban Diin ahaan iyo dhaqan ahaanba. Waa sunnaha sar-gooya wada-jirkeena iyo wada-joogeenna. Waa sida uu sunnahaa Hadraawi inoogu sawiray, markii uu inoo marinayay maansadiisii caan-baxday ee “Sirta nolosha”. Waa sunnaha is-waansiga iyo is-waaceensiga beelaheenna wada yaal. Waa sunnaha isku haya wadarta iyo wadaagaha danta guud ku walaaloobay ee Somaliland wada yeeshay.
Waa Qormooyin kooban oo taxane ah oo aan ku durayo inta danta guud wiiqaysa ee madaxda Qaranka wararka khaldan ku marin-habaabinaysa si ay muraadkooda u helaan. Waa Qormooyin kooban oo taxane ah oo aan ugu hiilinayo shaqaalaha daacadda ah ee hawshooda u darban ee aan dusduska iyo war-sheekada xarumaha Qaranka la meeraysan, wanjalka iyo wadeecadana aan caadaysan oo aan weliba lagu majeeran. Waa Qormooyin kooban oo taxane ah oo aan ku daafacayo Idaacadda cusub ee aynu ku hadaaqaynay oo maanta hirgashay bal se la ina leeyahay waa meel baas oo aan lagu nagaanayn.
Waa Qormooyin kooban oo taxane ah oo aan ku muunaynayo halgankii sharafta lahaa ee hubeysnaa ee dibuxoreynta Qaran ee SNM horseedka ka ahayd ee dalkan iyo dadkanba lagu xoreeyay. Waa Qormooyin kooban oo taxane ah oo aan milgo iyo maamuusba uga dhigayo geeddiyaashii la mahadiyay: dibuheshiisiintii, nabadayntii, hubdhigistii iyo geeddi-socodkii dimuqraadiyadeed. Waa Qormooyin kooban oo taxane ah oo aan ku caddaynayo in aan wax walba halgan lagu sheegin, bal se dhacdo walba ereygeeda loo adeegsado, halgankana halgan loo barto. Waa Qormooyin kooban oo taxane ah oo aan ku muujinayo in aanu hooyo-caygu halgan ahayn ee uu halgaad yahay. Waa Qormooyin kooban oo taxane ah oo aan ku muujinayo in midabka cadi caddaan yahay, madowguna madow yahay oo aanay wax la isku badhxi karo ama la isku khaldi karaba ahayn.